Xiaomi Poco F1 Lite ayaa ka soo muuqanaya markii ugu horeysay Geekbench | Androidsis
Sannadkii hore, Xiaomi waxay ku dhawaaqday summad cusub oo casri ah oo loo yaqaan 'Poco'. Taleefanka ugu horreeya ee keliya ee summaddu waa Poco F1 iyo, tan iyo markii la bilaabay, waxaan sugeynaa badalkiisa, oo aan rajeyneyno in loo bilaabo sida Poco F2.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in aan heli karno taleefan kale oo waxyar ka yara duwan oo aan awood badnayn kahor kan ugu dambeeyay ee lasoo sheegay, waana kan Yar F1 Lite, oo ku soo muuqday Geekbench isagoo faahfaahinaya qaar ka mid ah muraayadaha la jarjaray.
Dhowr saacadood ka hor, aalad leh magaca «Xiaomi POCO F1 Lite» ayaa lagu arkay Geekbench. Qalabka ugu waxqabadka hooseeya ayaa socda Android 9 Pie y waxaa ku shaqeynaya processor Qualcomm's Snapdragon 660. Waxay kaloo leedahay 4GB RAM.
Xiaomi Poco F1 Lite oo ku saabsan Geekebench
Poco F1 Lite wuxuu kahelay 1,341 dhibcood imtixaanka hal-xudunta ah iyo 4,830 dhibcood imtixaanka halbowlaha ah. Dhibcaha waa kuwo aad u hooseeya, marka la barbar dhigo taleefannada kale ee Snapdragon 660, sida kuwa Nokia 7 Plus (halkan ka muuji). Xaqiiqdii waxay kudhow yihiin taleefannada ay ku shaqeeyaan Snapdragon 636, sida kuwa Redmi Notes 5 Pro.
Sida laga soo xigtay Nashville Chatterclass, oo markii ugu horreysay ka warbixisay aragtida xarunta dhexe, ayaa sidoo kale lagu arkay taleefan leh magaca 'Xiaomi uranus' horaantii maanta oo ku taal calaamadda caanka ah. Waxaa jira warar sheegaya in Poco F1 Lite waa isla aaladda «Xiaomi uranus» maadaama dhibcahooda iyo qeexitaankoodu isku mid yihiin.
Muuqaal Xiaomi Poco F1 Lite oo ku saabsan Geekebench
Waxaan kugula talineynaa inaad ku qaadatid aragtidan milix yar. Tani ma aha markii ugu horreysay ee aan aragno qalab Xiaomi ah oo aan la garanayn oo ka muuqda Geekbench oo aan weligiisna la sii deyn. Haddii Poco F1 Lite jiro, faahfaahin dheeraad ah waa inay soo muuqataa maalmaha soo socda ama toddobaadyada soo socda. Waxaan ka soo warbixineynaa wax walba oo ku saabsan moodelkan fudud ee xiisaha leh ee shirkadda caanka ah ee Xiaomi, taas oo aqbal wanaagsan ka heshay suuqa oo ah inuu yahay midka ugu jaban ee ugu sarreeya, in ka badan wax kasta oo Hindiya ka jira.
(Xigasho: 1 y 2)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xiaomi Poco F1 Lite ayaa markii ugu horreysay ka muuqda Geekbench